Items 1 to 16 of 11 total
လေဖြတ် လေငန်း အကြောရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက် သံလွင်ခက် အကြောပြေဒဏ်ကျေလိမ်းဆေးသည် လေဖြတ်ခြင်းနှင့် လေငန်းရောဂါရှင်များ တစ်နေ့(၂)ကြိမ် ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ ဇက်ကြောတက်ခြင်း၊ ကားရထားစီး၍ မူးဝေခြင်း၊ နှာစေးနှာပိတ်ခြင်း၊ ခေါင်းအုံ ခေါင်းကိုက်ခြင်း တို့ဖြစ်လျှင် လိမ်းပေးပြီး ရှူဆေးအဖြစ်လည်း ရှူပေးနိုင်ပါသည်။ ခါးနာခြင်း၊ ဒူးနာခြင်း၊ အကြောဒဏ်နာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတို့ အတွက် ဆေးရည်ကို အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင် ပွတ်လိမ်းပေးပြီး ပတ်တီးဖြင့် စည်းထားပါ။
Usage: For the temporary relief of aches, minor discomforts of muscles and joints associated with sample headache, backache, arthritis, strains, bruises, sprains, nasal congestion and vertigo. ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက် ခရီးသွားဒဏ်ကြောင့် ပင်ပန်းနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ မူးဝေအော့အန်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မူးဝေမောပန်းခြင်း၊ ထုံကျဉ်နာ၊ ကျီးပေါင်းဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်သောဝေဒနာအမျိုးမျိုး ကြွက်သားများနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဒဏ်ဖြစ်ခြင်း၊ လေးဘက်နာသမားများ၊ ရောင်ရမ်း နာကျင်ခြင်း၊ အအေးမိနှာစေးခြင်း၊ နှာရည်ယိုနှာပိတ်ခြင်း၊ စိတ်မကြည်လင်ခြင်း တို့အတွက်ရောဂါဖြစ်ပေါ်ရာနေရာတွင် ဤဆေးကို နှံ့စပ်သေချာစွာလိမ်းပေးပါ (သို့) ရှူပေးပါ။တနေ့ တာအတွင်း (၄)ကြိမ်ထက်ပိုမလိမ်းရပါ။ ဤဆေးကိုအသုံးပြုပြီးသောအခါ ပတ်တီးစည်းထားရန်မလိုပါ။ မျက်လုံးနှင့် အနီးတဝိုက်နှင့် အနာဖြစ်နေသောနေရာ (သို့) ပျက်စီးနေသော အရေပြားပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အသုံးမပြုရပါ။ ကလေးငယ်များနှင့်ဝေးသောနေရာတွင်ထားပါ။ (၁၀)နှစ်အောက်ကလေးငယ်များကို လိမ်းပေးမည်ဆိုပါက တတ်ကျွမ်းနားလည်သောဆရာဖြင့် ပြသ၍လိမ်းပေးပါ။ (၃)နှစ်အောက်ကလေးများကို လိမ်းပေးရန်မသင့်တော်ပါ။ ပြင်ပလိမ်းဆေးအဖြစ်သုံးရန်သာဖြစ်၍ စားသုံးရန်မသင့်တော်ပါ။ စားသုံးမြိုချမိပါက ချက်ချင်းနီးစပ်ရာဆေးရုံသို့သွား၍တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့်ဆရာဝန်ဖြင့်ပြသတိုင်ပင်ပါ။ အေး၍ ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်ထားပါ။ အပူချိန်များသောနေရာများတွင်မထားရပါ။
Usage: For the temporary relief of minor discomforts of muscles and joints associated with simple back-ache, headache, arthritis, strains, bruises, sprains. ခေါင်းကိုက်၊ ဒူးနာ၊ ခါးနာ၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်း၊ လေဖြန်းလေဖြတ်ထုံကျဉ်နာ၊ သွေးလေမလျှောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ ကျီးပေါင်းဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်သောဝေဒနာအမျိုးမျိုး ကြွက်သားများနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဒဏ်ဖြစ်ခြင်း၊ လေဖက်နာသမားများ ရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်း၊ ခရီးသွားဒဏ်ကြောင့် ပင်ပန်းနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း တို့ အတွက် ရောဂါဖြစ်ပေါ်ရာနေရာတွင် ဤဆေးကိုနှံ့စပ်သေချာစွာ လိမ်း၍ ဆုပ်နယ်ပေးပါ။ တနေ့ တာအတွင်း (၄)ကြိမ်ထက်ပိုမလိမ်းရပါ။ ဤဆေးကို အသုံးပြုပြီးသောအခါ ပတ်တီးစည်းထားရန်မလိုပါ၊ မျက်လုံးနှင့် အနီးတဝိုက်နှင့် အနာဖြစ်နေသောနေရာ (သို့) ပျက်စီးနေသောအရေပြားပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အသုံးမပြုရပါ။ ကလေးငယ်များနှင့်ဝေးသောနေရာတွင်ထားပါ။ (၁၀)နှစ်အောက်ကလေးငယ်များကို လိမ်းပေးမည်ဆိုပါက တတ်ကျွမ်းနားလည်သောဆရာဖြင့် ပြသ၍လိမ်းပေးပါ။ (၃)နှစ်အောက်ကလေးများကို လိမ်းပေးရန်မသင့်တော်ပါ။ ပြင်ပလိမ်းဆေးအဖြစ်သုံးရန်သာဖြစ်၍ စားသုံးရန်မသင့်တော်ပါ။ စားသုံးမြိုချမိပါက ချက်ချင်းနီးစပ်ရာဆေးရုံသို့သွား၍တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့်ဆရာဝန်ဖြင့်ပြသတိုင်ပင်ပါ။ အေး၍ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်ထားပါ။ အပူချိန်များသောနေရာများတွင်မထားရပါ။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်တော်ပြီး အထောက်အကူပြုသော သဘာဝ ပျားပိတုန်းများမှ ထွက်ရှိသော ပျားဝတ်မှုန်များကို အခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးတစ်မျိူးဖြစ်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော22 Amino Acid ပါဝင်ပြီး14 essential Fatty Acid, 12 vitamins များ ပါဝင်မှုအပြင် β-carotene, vitamin B complex, vitamin C, D နှင့်calcium, magnesium and selenium အစရှိသော အားဆေးများ ပါဝင်သောကြောင့် သောက်သုံးသင့်သော ဆေးအမျိူးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပျားဝတ်မှုန်သည် အစာခြေဖျက်ပေးမှုကို ကူညီပေးသော Enzymes များပါဝင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ဓါတ်တိုးစေသော အကျိူးသက်ရောက်မှုများ နှင့် အမျိူးမျိူးသော Function များအတွက် လုပ်ဆောင်မှုမျိူးတွင် အကျူံးဝင်သော ဆေးကောင်းတစ်မျိူးဖြစ်သည်။ Urethra မှ ဝန်းရံသောကြွက်သားများကို ဖြေလျော့ပေးပြီး ကျန်းမာရေးကို ဆိုးကျိူးပေးနိုင်သော ဆီးကျိတ်ဆဲလ်များ ကြီးထွားမလာအောင် တားဆီိးကာကွယ်ပေးနိုင်သော Anti-Inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိသည်။ BPH အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။သဘာဝ ဟော်မုန်းဓာတ်များကို ထုတ်လွတ်ပေးပြီး မျိူးပွားမှုဆိုင်ရာ စနစ်များကို လှုံဆော်ပေးသော အာဟာရသဘာဝ ဟော်မုန်းများသတ္တိများ ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ ပျားဝတ်မှုန် Raiotherapy သည် ကင်ဆာလူနာများတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်အဆိပ်သင့်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးသော ထိရောက်သော ဖြည့်စွက်အာဟာရမျိူး ရရှိနိုင်ရန်ကူညီပေးသော ဆေးကောင်းတစ်လက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆေးကို ပျိူ့အန်ခြင်း၊ အအိပ်အစား မမှန်ခြင်း၊ ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုသမှု ခံယူနေသော လူများ နှင့် rectal မမှန်သော သူများအတွက် သက်သာပျောက်ကင်းသော ဆေးစွမ်းကောင်းအဖြစ် အကျိူးပြုမှုများကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့သော ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဆေးကောင်းတစ်မျိူးကို မှာယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Pro Glo Fluorescein Strips Item Number:101655 (Fluorescein Sodium) 1 mg strips, 300/dispensing box These strips have smooth rounded tips, lint-free. The strips are individually packaged in an easy-to-open &#039;band-aid type&#039; wrapper.
Nature&#039;s Bounty Fish Oil
1200 mg of Omega-3 Per Serving Twice the Potency of EPA/DHA than Other Fish Oil Products Coated to Minimize Fish Burps! Purified to Eliminate Mercury, PCBs &amp; Dioxins Dietary Supplement Laboratory Guaranteed Quality Tested Double Strength Odor-less Fish Oil coated and contains EPA and DHA, which help support and maintain the health of your cardiovascular system. Omega-3 fatty acids are considered &quot;good&quot; fats important for heart and circulatory health. Omega-3s also help maintain triglyceride levels already withinanormal range.
Nature&#039;s Bounty Co Q-10
25% More Free Clinically Studied Ingredient for Heart Health Rapid Release Liquid Softgel Dietary Supplement Guaranteed Quality - Laboratory Tested Co Q-10 provides antioxidant protection and cardiovascular support. Statin medications can reduce Co Q-10 levels in the body. Co Q-10 can replenish what Statin medications may deplete.
Nature&#039;s Bounty ABC Plus
Guaranteed Quality - Laboratory Tested Compare + Save Multivitamin / Multimineral Supplement Supports Heart Health Dietary Supplement